Ikhaya > Izindaba > Izindaba zezimboni > Izesekeli zefenisha yasehhovisi zidinga ukusebenzisa ini?
Izesekeli zepulasitikiasetshenziswa kakhulu empilweni, enye ifenisha izosetshenziswa, kepha futhi idlala indima ebaluleke kakhulu, ifenisha yasehhovisi ikakhulukazi ibhekisa kufenisha efanelekile ehhovisi, ekufakweni nasekukhiqizeni kusadingeka ukuxhaswa kwezinye izesekeli, khona-ke izesekeli zehhovisi zehhovisi zehadiwe ini?
Into ebaluleke kakhulu ehhovisi ifenisha hardware izesekeli ukuxhumana. Lo mkhiqizo usetshenziselwa ikakhulukazi ukuxhumana kwesisekelo sefenisha. Vele, ikhwalithi yomkhiqizo nayo iphezulu kakhulu, enobudlelwano obukhulu nokusetshenziswa kwamuva.
Empeleni, kukhona izesekeli ezisemqoka efenisha ukhiye nesibambo, ilokhi nesibambo akudingi ukuthi ngiyethule, lokhu kuyadingeka ngefenisha, ilokhi manje isemakethe ngokukhiya ngogesi nokhiye wokhiye, kuningi izinhlobo zokubamba, ungakhetha ngokuya ngezidingo zazo.
Izesekeli zefenisha yehhovisi leHhovisi kukhona isilayidi, kudrowa kunesidingo sokuslayida, futhi kwisilayidi ngokuvamile kwenziwa ngepulasitiki, ngekhwalithi inqobo nje uma singasebenzisi ikhwalithi ngeke ibe nenkinga enkulu kangako.
Ifenisha yasehhovisi igxilwe esidingweni sokuma ne-castor, le mikhiqizo ingaba nomphumela wokulungiswa, obekwe egumbini nakho ngeke kuvele umphumela wokulimala, ngoba inqubo yokukhiqizwa kwemikhiqizo yasehhovisi nayo incane hhayi, kepha uma khetha umkhiqizo omuhle ngekhwalithi yokubeka izinyawo futhi muhle kakhulu, futhi uhlobo lwehhashi lwenziwe ngezifiso kakhulu futhi luyinoveli, faka umbala kakhulu enkampanini.
Ukwahlukaniswa kwezinsiza zefenisha zehhovisi zehhovisi:
Ngokuya ngezigaba ezibonakalayo:i-zinc alloy, i-aluminium alloy, i-iron, ipulasitiki, insimbi engagqwali, i-PVC, i-ABS, ithusi, inayiloni, njll
Ngokusho komsebenzi wokuhlukaniswa:isakhiwo sefenisha yehadiwe: njengesakhiwo sensimbi yetafula lengilazi, umlenze wensimbi wetafula eliyindilinga njalonjalo
Ihardware esebenzayo yefenisha:uma ugibela ihhashi ukudweba, ihinji, 3 kokuhlangana ucezu, isilayidi ithrekhi, ungqimba ibhodi ubamba isikhashana
Okuhlobisa ifenisha yehadiwe:ezifana ne-aluminium onqenqemeni, elengayo lensimbi, isibambo sensimbi nokunye
Izesekeli zefenisha yehhovisi laseHhovisi ikakhulukazi zifaka isikulufa, isikulufa sokhuni, ihinji, isibambo, isilayidi, iphayiphu yedayaphragm, izesekeli zekhreyithi, isipikili, umshini wokuqondisa, umshini wokugoqa intambo, umshini wokudlulisa, izinyawo zensimbi, ifreyimu yensimbi, isibambo sensimbi, isondo, isondo, uziphu, induku yomoya, iziphethu, imishini, ifenisha ihinji, idilowa, umzila wesitimela, insimbi, ukudonsa ubhasikidi, ibha yokulenga, usinki, ubhasikidi, ukudubula ukukhanya, ibhodi lokugwedla, ummese kanye nesitsha semfoloko, i-condole hang, ikholomu yemisebenzi eminingi, umzimba wekhabethe isihlanganisi.
Kulezi zinsuku, ifenisha ye-Hardware ifaneleka kakhulu kumthengi, inkampani ngayinye yefenisha kufanele iqonde ukuthambekela kwemakethe, iwusebenzise lo mkhuba futhi for.Hardware ifenisha yezesekeli imakethe iyashisa, inkomba entsha yentuthuko yamabhizinisi.
Kwedlule:Ifenisha yePlastiki isiphenduke amandla amasha embonini yefenisha
Olandelayo:Wazi kangakanani ngezici zezinsimbi zefenisha yehadiwe?